प्रधानमन्त्री ओली एकाएक बिरामी ! के भयो ? – ताजा समाचार
प्रधानमन्त्री ओली एकाएक बिरामी ! के भयो ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पुनः अस्वस्थ हुनुभएको छ । मुटुको चाल र सुगरमा गडबडी हुँदा प्रधानमन्त्री ओली पुनः अस्वस्थ हुनुभएको हो । वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा.अरुण सायमीका अनुसार धपेडी र तनावका कारण प्रधानमन्त्री अस्वस्थ हुनुभएको हो ।
स्वतन्त्र नागरिक समाजले आगामी मंसिरसम्म नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र पुनर्स्थापना नगरेमा सत्याग्रह सुरू चेतावनी दिएको छ ।
नेपालमा जनै लगाउने र नलगाउने गरी ओमकार परिवार ९४५ प्रतिशत बसोबास गर्ने दाबी गर्दै समाजले विश्वको एकमात्र हिन्दु अधिराज्य नेपालमा शाहवंशीय राजसंस्थालाई भूमिका दिन माग गरेको छ ।